यी हुन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी (सूचिसहित) - Dainikee News::Fastest news portal nepal, news from nepal
काठमाडौं, वैशाख १७ । अहिले बजारमा २ कम्पनीको विभिन्न अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री खुला छ । त्यसैगरी २ वटा कम्पनी हकप्रदको तयारी गर्दैछ । यी कम्पनीहरूले पूँजीवृद्धिको अभियानस्वरूप शेयर निष्काशन गरेका हुन् ।
हाल हकप्रद निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूमा देवः विकास बैंक र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् भने कुमारी बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स हकप्रदको तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरु
१. देवः विकास बैङ्कः यस बैंकले १० बराबर ४ को अनुपातमा चैत २६ गतेदेखि हकप्रद शेयर जारी गरेको छ । बैङ्कले प्रतिशेयर रू. १०० अङ्कित दरको ६५ लाख ३३ हजार १ सय ८ दशमलव ५९ कित्ता हकप्रद शेयर बैशाख ३० गतेसम्मका लागि जारी गर्न लागेको हो । बैङ्कले हकप्रद प्रयोजनका लागि फागुन १७ गते बुक क्लोज गरेकाले फागुन १६ गतेसम्म शेयर स्वामित्व हुने सदस्यहरुले यस हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद खरीदका लागि विक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त सी–आस्वा सेवामा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । हाल रू. १ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ७७ हजार चुक्तापूँजी रहेको बैङ्कको हकप्रद पश्चात रू. २ अर्ब २८ करोड ६५ लाख ८८ हजार पुग्नेछ ।
२. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः यस इन्स्योरेन्सको शत प्रतिशत अर्थात् १ः१ अनुपातमा शेयर २०७५ बैशाख ५ गतेदेखि निष्कासन भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३० लाख १९ हजार ८८६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको गत चैत्र २२ गतेसम्म कायम शेयरधनिहरुका लागि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयर आजदेखि जेठ ८ सम्म खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ३० करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद निष्कासनपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २२० कित्ता पुग्नेछ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रदले समेत पाउने गरि २ दशमलव २६२ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव समेत गरेको छ । बोनसपछि कम्पनीको पूँजी ६१ करोड ७६ लाख ३८ हजार ७०५ रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय र आस्वा प्रणालीमा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
हकप्रद शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेका कम्पनीहरु
१. कुमारी बैंक लिमिटेडः यस बैंकको १०ः२ अनुपात अर्थात् २० प्रतिशत हकप्रद शेयर बैशाख २८ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ करोड १९ लाख ३८ हजार ९९१ दशमलव ६५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको वैशाख ९ गतेसम्म कायम शेयरधनिहरुका लागि १० बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयर वैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३१ खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, कुमारी बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय र आस्वा प्रणालीमा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
२.सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीः यस कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०ः४ अनुपातको हकप्रदश शेयर वैशाख ३१ गतेदेखि निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २८ लाख ८७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको वैशाख ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुका लागि १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयर वैशाख ३१ गतेदेखि असार ३ खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा बिक्री प्रबन्धक एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण शाखा कार्यालय र आस्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, बैशाख १७, २०७५ /Monday, April 30th, 2018, 10:22 am